Mma - Bezzia | Bezzia
La mma Ọ bụ ala sara mbara nke ukwuu, ebe ụmụ nwanyị na-achọta ụzọ iji maa mma, dị ka ndị ọzọ ma nwee ahụ iru ala. N'ihi nke a, site na magazin anyị, anyị na-etinye oke mkpa na akụkụ a, nke na-ekpuchi akụkụ dị iche iche nke aesthetics, mgbe niile site na ndị ọkachamara na-enye ma ndụmọdụ abụọ iji mezuo aghụghọ na akụkọ kachasị ọhụrụ site na ụdị metụtara ụwa a.
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ndụmọdụ iji weghachite akụkụ dị iche iche nke ahụ gị, anyị ga-akwado productos nke iji mee nke a na anyị ga-elelekwa ndị a ma ama ịgbalị ịgbaso usoro ọkachamara ha, dịka ọmụmaatụ.
Techaa, edozi isi, mbọ, ihe nsure ọkụ ma ọ bụ ọgwụgwọ mara mma ga-adị na ngalaba a, nke ga-adị oge niile ga-agwakwa gị ihe nzuzo niile ka ịchọrọ zuru oke.
Otu esi etinye ịchafụ: Echiche ngwa ngwa na nke bara uru
por Susana godoy eme Awa 16 .
Ị chọrọ ịma ka esi etinye ịchafụ? Ọ ghọwo otu n'ime ngwa mma anyị mara mma. N'ihi na ọ nwere ike…
Ogbugbu mkpuchi: Echiche kacha mma iji nweta ya
por Susana godoy eme 1 ikp .
Ị chọrọ ikpuchi egbugbu? Ikekwe i jirila echiche efu niile mee ya mana oge na -abịa mgbe ...
Igodo iji nweta ntutu ọla kọpa zuru oke
Ntutu ọla kọpa na -ewu ewu, a na -ahụ ya kwa ụbọchị na catwalks gburugburu ụwa, na ...
Atụmatụ etemeete maka ndị mbido
por Nke Torres eme Ụbọchị 4 .
Ime etemeete bụ ihe na -atọ ụtọ, ọ bụ ihe okike, gwuo egwu ma dabara adaba maka ndị niile chọrọ iji ya eme ihe ...
Ị ma ka esi etinye ihere? Ọ dị ka ọ dị ihe dị nfe ma ọ bụghị na anyị ga -akpaghasị onwe anyị nke ukwuu, mana na ...
Nku anya ga na -elekọtakwa ha mgbe niile, n'ihi na ha ga -enyekwu anyị ihu n'ihu na n'ihi na ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ...
Ị chọrọ ị nweta pedicure ọkachamara? Yabụ na ọ nweghị ihe dị ka ịgbaso usoro usoro dị mkpa wee bido onwe gị ime ya nke ọma na ...
Nzọụkwụ dị mkpa maka usoro ịma mma dị mma
Ịgbaso usoro ihe ịma mma dị mkpa iji nwee anụ ahụ mara mma ma mara mma. Mana taa ...
por Nke Torres eme 2 izu .
Mgbụsị akwụkwọ na -akụ aka n'ọnụ ụzọ yana ya, usoro ihe etemeete ọhụrụ na -abịa inye agba ...
Ọ bụrụ na enwere ụdị ejiji dị mma maka oge ọhụrụ, a ga -enwekwa usoro nke agba ntutu….
Otu esi ejikọ ntutu isi na ụmụ nwoke
Ịchọrọ igosipụta ụdị edozi isi dị ugbu a na ntutu laghachiri n'ime ụmụ nwoke? Ọ bụ ezie na ọ bụkwa ihe a na -ahụkarị na ụmụ nwanyị ịhụ ...
Etu esi emeso ntu ojii
Fụrụ akpụ ihu mgbe ọ na-eteta, ihe na-akpata ya na ọgwụgwọ ya
Hydrogen peroxide dị na ntutu, uru na ọghọm
Ugboro ole ka ọ na-adị mma ka ị na-eteji
Otu esi ewepu isi anwụrụ na ntutu gị
Ubu n’onu ara
Esi gwọọ ntu
Etu esi eji aloe vera na ntutu
Etu esi ewepu mmanu na ntutu, aghụghọ nke na aru oru
Dị ụdị ntutu isi na nke ịhọrọ
Otu esi ehicha ntutu dị ọcha
Esi belata mbufụt nke nje, usoro kachasị mma!
Ihe enamels kachasị dị gị mma dịka ụda akpụkpọ gị si dị
Hairda ntutu kachasị dị ụtọ maka ụmụ nwanyị brunette
Echiche ụgha na eziokwu gbasara ejiji na-enweghị ammonia ị kwesịrị ịma